“Waxaan Baraha Bulshada soo dhigayaa muuqaal Xildhibaan Cabdirashiid Xidig oo iga codsanaya in la dilo Madaxweyne Axmed Madoobe” – Kalfadhi
“Waxaan Baraha Bulshada soo dhigayaa muuqaal Xildhibaan Cabdirashiid Xidig oo iga codsanaya in la dilo Madaxweyne Axmed Madoobe”
September 7, 2020 September 7, 2020 Hassan Istiila
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesoow iyo Xildhibaan Cabdirashiid Xidig, oo labaduba ka tirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya, ayaa khilaaf xooggan oo ka dhaxeeya uu soo if-baxay, kaas oo salka ku haya arrimaha deegaannada Jubbaland.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesoow oo kamid ah Aqalka Hoose ee Baarlamaanka Soomaaliya, oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Mogadishu ayaa sheegay in wax laga xumaado ay tahay in xildhibaan Cabdirashiid Xidig uu wax ka sheego diinteyda iyo sharafteyda.
“Axmed Madoobe iyo anniga dagaal wuu naga dhaxeeyaa, laakiin waxaa is weydiin mudan Cabdirashiid Xidig iyo Axmed Madoobe, bilooyin ka hor maxey isku dilaayeen”.
Waxaan hayaa muuqaal Cabdirashiid Xidig uu aniga iga codsanayo in Axmed Madoobe la dilo, Baraha Bulshada ayaan muuqaalkaasi soo dhigi doonaa, markii horeba Axmed waan is heysanay aan sidii hore si ka darran ula dagaallamo. Waxaan hayaa cod isaga oo igu dhahaya war dadkaaga iyo reerkaaga igu soo xir, ayuu yiri Jeesow.
Xidig walaalkiis waxaa uu ku dilayay soor laakiin anniga qadiyad ayaa iga maqneyd, nin walaalkiisa soor ku dilaayay in maanta anniga aqlaaqdeyda, diinteyda iyo sharafteyda wax u dhimo runtii aad baa looga xunyahay, ayuu sii raaciyay.
Xildhibaan Cabdirashiid Xidig oo dhankiisa wareysi bixinayay ayaa sheegay in Daahir Amiin Jeesow, ay aheyd in shacabka uu ka dhuunto oo meelaha la isugu yimaado uusan ka hadlay, madaama uu taageeray in dadka isku jinsiga ah ay is guursan karaan, balse xildhibaan Jeesow oo arrintaasi ka jawaabayay ayaa sheegay in mar walba dadka ay is qabtaan ay soo qaataan cajal ay nimanka nabad diidka ah ay jar-jareen.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ayaa maalmo ka hor ugu baaqay Madaxweynaha dowlada federalka Soomaaliya inuu xabsiga u taxaabo madaxweynaha Maamul Goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe.